Ukulindela Ulwalathiso LukaYehova | UTamazi Biblaia
IBALI LOBOMI Wayencedisa kumsebenzi wokushicilela ngokufihlakeleyo ibe wayengomnye wabaveleli abajikelezayo bokuqala eGeorgia, ngoxa wayekhulisa nabantwana abane.
UMAMA wacaphuka kakhulu xa mna nomfazi wam uTsitso saba ngamaNgqina KaYehova. Ngenye imini wabiza izalamane zethu ecinga ukuba ziza kusiyekisa ukunxulumana namaNgqina. Kwathiwa mandikhethe phakathi kokugxothwa ekhaya nokuba liNgqina.
Ndagqiba ekubeni ndifudukele kwenye indawo. Ekubeni ndisebenza ngeentsimbi, ndakha ndacinga ukuya eKutaisi, idolophu yesibini ngobukhulu eGeorgia, apho ndandinokuwufumana lula umsebenzi. Ndandisazi nokuba kufuneka abavakalisi abangakumbi kwesa sixeko, ngoko ndacela ulwalathiso kuYehova.
Kungekudala, ndadibana nesinye isifundo sam, esasihlala kwenye idolophu encinci ekuthiwa yiJvari. Xa weva ukuba ndicinga ngokufudukela eKutaisi, wandicenga ukuba ndiyokuhlala kwidolophu yakhe. Wathi: “Sinayo indawo. Mna nomfazi wam nabantwana siza kuhlala kwelinye igumbi, wena nomfazi wakho nihlale kwelinye.”
Ekubeni ndandilinde ulwalathiso lukaYehova, ndamxelela ukuba ndinokusamkela okwangoku esi sicelo ukuba ndiza kukhawuleza ndifumane umsebenzi nendawo yokuhlala eJvari. Ndothuka xa wabuya noludwe lwemisebenzi kwangaloo ngokuhlwa.
Kwiintsuku ezimbalwa emva koko safudukela eJvari. Ndafumana umsebenzi orholisa umvuzo oncumisayo kwakusuku lokuqala. Umphathi wam wandinika indawo yokuhlala kwindlu enkulu yenkampani. Kungekudala emva koko ndacelwa ukuba ndincedise kumsebenzi wokushicilela iincwadi zeBhayibhile owawusenziwa ngokufihlakeleyo. Ekubeni sasinendawo enkulu kwikhaya lethu elitsha, salivulela lo msebenzi.
Kangangeminyaka emininzi iSikhumbuzo nezinye iintlanganiso ezikhethekileyo zaziqhutyelwa kwindlu yethu. Abantu abangaphezu kwe-500 babhaptizelwa kuyo. Ndiyavuya kuba ndabubona ubungqina bolwalathiso lukaYehova ndaze ndalulandela!